(MK-677 Powder) Iingcebiso zokusebenzisa i-Ibutamoren Powder | AASraw sarms powder
(MK-677 Powder) Iingcebiso zokusebenzisa i-Ibutamoren Powder
/Blog/Ibutamoren , MK-677/(MK-677 Powder) Iingcebiso zokusebenzisa i-Ibutamoren Powder
ezaposwa ngomhla 01 / 05 / 2018 by 阿斯劳 bha liweyo Ibutamoren, MK-677.
(MK-677 Powder) Iibutamoren Powder Powder Iingcebiso zokusebenzisa
1.Yintoni (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder? I-2. (MK-677 Powder) I-Ibutamoren Powder Inzuzo eziphambili
I-3. (MK-677 Powder) I-Ibutamoren I-Effect Side Effects 4.Kubani ukukhetha i-MK-677 powder?
5..Indlela yokusebenzisa i-Ibutamoren 6.Yiyiphi imilinganiselo Ndifanele ndiyithathe?
7.Kungani Kunconywa ukuba i-Bodybuilders? Iinkcukacha zePowder 8.MK-677:
9.Ungathabatha njani iLiquid MK-677 ye-Powder Raw? 10.Thenga iGenius MK-677 Powder evela kwi-AASraw
1.Njani'(MK-677 Powder) Ibutamoren Powder?
(MK-677 Powder) Ibutamoren Powder sisiyobisi esinokuphucula ubomi obude, uxinano lwethambo, amandla okuqonda, amandla kunye imetabolism. Kuphandwa isifo se-Alzheimer, ubuthathaka kubantu abadala, kunye nokusilela kwehommone yokukhula.
I-MK-677 isetyenziselwa ngabadlali ukuba bafumane umncintiswano wezemidlalo. I-MK-677 ibopha kwi-ghrelin receptor, ixelisa imiphumo ye-ghrelin. Ezi ziphumo zazibandakanya ukwanda kwexhala, ubunzima besisipha, isisitye samaminerali, i-angiogenesis, intetho ye-VEGF, ukukhuselwa kwentliziyo, kunye ne-modulation ye-glucose kunye ne-homeostasis yamandla.
I-Ibutamoren idlalwa rhoqo kwiifom ye-intanethi ye-anabolic yayo imisiphaizakhiwo zokwakha. Itholakala ngaphaya kwekharityhulam kwaye isetyenziswe ngabo banqwenela ukwandisa amazinga e-hormone yokukhula.
Nangona kunjalo, uphando lwekliniki lwale ngxube lincinci. Kwimiyalezo engezantsi, siza kugqamisa into eyaziwayo malunga ne-ibutamoren kude kube ngoku.
I-Ibutamoren (eyaziwa nangokuthi ibutamoren mesylate okanye i-MK-677), ikhuthaza ukugcinwa kwe-hormone yokukhula (GH) kwaye ikhulise ukukhula okufana nokukhula kwe-insulin 1 (IGF-1).
I-Ibutamoren yandisa amazinga e-hormone yokukhula, ngokulinganisa intshukumo ye-hormone ghrelin, kunye nokubopha enye ye-ghrelin receptors (GHSR) kwingqondo. Usebenze i-GHSR ikhuthaza ukukhululwa kwehommone yokukhululwa kwengqondo.
I-GHSR ifumaneka kwiingingqi zengqondo ezilawula ukutya, ukonwaba, imizwa, izandi, imemori kunye nokuqonda. Ngoko ke, sinokulindela ukuba ibutamoren inokuchaphazela le mi sebenzi. Nangona kunjalo, ngoku, iziphumo zeklinikhi zichaza kuphela imiphumo ye-ibutamoren inomdla - kwaye kulindeleke, njengeghrelin, ibutamoren iyanda.
Into ebalulekileyo malunga ne-ibutamoren kukuba yandisa amazinga e-hormone yokukhula ngokunyuka okanye kungabikho ukwanda kwamanye amahomoni, njenge-cortisol. I-Cortisol igxotha i-immune system, iyanciphisa ukuphulukiswa kwesilonda, kwaye iyonakalisa ukufunda nokukhumbula, kwaye akuqhelekanga ukuba le hormone iphakanyiswe.
I-2. (MK-677 Powder) I-Ibutamoren Powder Inzuzo eziphambili
Iinjongo zempilo ze-MK-677 zikhangeleka. I-hormone yokukhula iyancipha ngokuguga, kwaye i-MK-677 ibonakalise kwizilingo ezilawulwe ngokungahleliwe, ezilawulwa yi-placebo ukuguqula ukuhla kwe-1.
Le ndlela yeklasi yokuphanda ixesha elide. Ukubonisa ukuba yiyiphi i-hormones, i-neurotransmitter okanye ezinye iimpawu eziyehla ukuguga. Emva koko, yabona ukuba ukubuyisela amanqanaba kugqithisa nemiphumo yokuguga.
Ndaqala ukuba nomdla kwi-MK-677 kuba ndiphanda ubudlelwane phakathi kokulala kunye ne-hormone yokukhula.
Ngaphambi kokuba ndixoxe ngezibonelelo, iziphumo ebezingalindelekanga, kunye nomthamo we (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder, masibuyele phezulu kwaye sixoxe ngokukhula kwehormone uqobo.
1) I-Ibutamoren iyakusiza ukwakha izihlunu
I-Ibutamoren isetyenziswe rhoqo njengento e-anabolic, ukwandisa ubunzima bomzimba obunzima, oko kukuthi kudala izihlunu ezinkulu. Isebenza ngokusemthethweni kwaye inokuthathwa kanye ngosuku. Ezi zizonke iinzuzo zifaniswa namanye ama-hormone ekukhuleni.
Njengoko kukhankanywe ngaphambili, ibutamoren kwandisa amazinga e-hormone yokukhula kunye ne-IGF-1. Bobabini i-hormone yokukhula kunye ne-IGF-1, kwakhona, ukwandisa ubunzima bomzimba, amandla omzimba, nokunciphisa amanqatha omzimba.
Kwindoda enobulunga obunempilo, unyango lweenyanga ezimbini kunye ne-ibutamoren lwandise ubunzima obuxhambileyo, kwaye ngokukhawuleza lwandise isantya sexabiso (BMR).
I-2) I-Ibutamoren iyanciphise umonakalo we-Muscle
Kwizivolontiya ezinempilo ezikhuseleyo zokutya, ibutamoren iguqula ukulahleka kwiprotheyini ekudliwayo, okubangelwa ukutshabalalisa imisipha.
Kwizigulane ezisebekhulile ezinokuqhaqhaza kwe-hip, ibutamoren ukuphuculwa kwesantya, amandla omzimba kunye nokunciphisa inani lokuwa.
I-3) I-Ibutamoren iyakwandisa ubuxhakaxhaka bamathambo
Ihommone yokukhula (GH) yonyusa ingeniso yethambo kwaye ekugqibeleni uxinano lweethambo. Nangona kunjalo, ngenxa yokonyuka kwemali engenayo kwizifundo eziphathwe ngehomoni yokukhula, uxinano lwethambo lunokuhla kuqala ngaphambi kokunyuka. Ngokusisiseko, kuthatha ixesha (> 1 unyaka) ukubona ukunyuka kwamathambo.
Kwizivolontiya zendoda enobulunga obunempilo, ibutamoren yanda inzuzo yeethambo.
Abantu asebekhulile, ibutamoren yandisa isakhiwo sezithambo, njengoko sisilinganiswa yi-osteocalcin, ummakishi weethambo.
Kwimistim e-post-menopausal, ibutamoren yanda i-bone mineral mass, eyinceda ukwanda kwamathambo nokukhusela i-osteoporosis.
4) Ibutamoren Iphucula Ubuthongo
Uphononongo lubonise ukuba kwizifundo zabancinci nabadala, ibutamoren umgangatho wobuthongo obuphuculweyo kunye ne-REM (ukuhamba kwamehlo okukhawuleza) ixesha lokulala.
Ngaphandle kwezifundo zenzululwazi, kukho iingxelo ezininzi zokuphucula eziphantsi komgangatho wobuthongo, kuzo zonke iifom e-intanethi.
5) I-Ibutamoren Iintlantshi zokuguga kunye no-Meyi zandisa ubude
Ukukhula kweHormone (GH) kunye nokusila kwesisipha zombini kokuhla ukususela kwiminyaka yobushushu ebomini.
Kwisifundo kubantu asebekhulile, ibutamoren imihla ngemihla yanda amazinga e-GH kunye ne-IGF-1 kulabo bantu abadala abasempilweni abangenayo imiphumo emibi. I-IGF-1 iyaziwa ngokuba negalelo elifanelekileyo kwixesha elide.
Kwesinye isifundo, ibutamoren yavuselela iphrofayili yokukhula kwimixholo emininzi.
6) Ibutamoren UCanzibe Yiba Nootropic I ziphumo
Abanye abantu basebenzisa ibutamoren njenge-nootropic kuba isebenza kwi-ghrelin receptor, eneempembelelo ze-nootropic. Unokufunda ngakumbi malunga nale miphumo kwisithuba kwi-ghrelin. INzululwazi ke, nangona kunjalo, ukuba ufunde ukuba kwaye ibutamoren ithinta njani ukusebenza kwengcamango.
Iinkqubo ezimbini ezingabonakaliyo apho ibutamoren inokuphucula ukusebenza kwengqondo:
I-Ibutamoren ikhulisa i-IGF-1, eyaziwayo ukuphucula imemori nokufunda.
I-Ibutamoren iphinda ikhulise ixesha lokulala kwe-REM kunye nobomi bokulala. Kwaye siyazi ukuba ubuthongo bubalulekile ekusebenzeni kakuhle kwengqondo.
Uphando lwalubuza umbutho we-IGF-1 nesifo se-Alzheimer, nokuba ingaba ibutamoren ingaba luncedo. Nangona kunjalo, kulolu cwaningo, ibutamoren yayingenakusebenza ekunciphiseni ukuqhubela phambili kwe-Alzheimer kubantu.
I-7) I-Ibutamoren inenzuzo ekuThatheni ukuKhula kweHormone
I-Ibutamoren inokwandisa i-hormone yokukhula, i-IGF-1, kunye ne-IGFBP-3 kumazinga kubantwana abanokukhubazeka kwehommone. Ukongezelela, ezi ziphumo zifezekiswa ngaphandle kokutshintsha i-prolactin, i-glucose, i-triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), thyrotropin, cortisol okanye i-insulin.
Ngabantu abanobunzima be-GH, ibutamoren yanda i-IGF-1 kunye ne-hormone yokukhula, kungekho tshintsho ephawulekayo kwi-cortisol, i-PRL, kunye namazinga e-hormone ye-thyroid. Nangona kunjalo, i-insulin kunye ne-glucose zandisiwe.
I-8) I-Ibutamoren Ngamana unokuncedisa ukuPhiliswa kweNxeba kunye nokuBuyiselwa kweTishu
I-hormone yokukhula ikhulisa ukuhlaziywa kwesisu kunye nokuphulukiswa kalisa, ngoko ibutamoren inokunceda kwezi.
Kukho iingxelo zomntu ngamnye zebutamoren ezincedisayo, kodwa uphando lwezesayensi ludlala.
I-9) I-Ibutamoren Ngamancedo ngamaHangovers
Lo ungokoqobo, kodwa abantu banika ingxelo yokuphilisa i-hangovers nge-ibutamoren.
I-3. (MK-677 Powder) I-Ibutamoren I-Effect Side Effects
Iimpembelelo eziqhelekileyo ze-ibutamoren ziyanda kwinqwelo yokutya kunye nexesha elide, i-edema ephantsi ephantsi kunye nobuhlungu be-muscle (R).
Ucwaningo oluninzi lubonisa ukwanda kokutya kwegazi nge-glucose kunye nokuhla kwe-insulin ye-senicity (R, R).
Ezi ziphumo zempembelelo zifana nezo zibonwa kubantu abanezinga eliphezulu lokukhula kwe-hormone, intlungu edibeneyo kunye nokuxhatshazwa kwe-insulin (R, R).
Nangona uphando oluninzi lubika ingxelo encinci okanye kungekho miphumo emibi, isifundo esinye sagqitywa ngenxa yeziganeko ezimbi. Kwizigulane ezisebekhulile ezinokuqhaqhaqhaqhaza i-hip, ibutamoren ephakamileyo yomsinga wegazi, i-blood glucose kunye ne-HbA1c, kwaye kukho iimeko zokwahluleka kwentliziyo ye-congestive (R). Izigulane ezinokuphelelwa yintliziyo ye-congentive ye-80 kwaye zineembali zokulahleka kwentliziyo.
Kuya kuqiqa ukujonga i-carbohydrates yakho yondla kwaye ihlolisise iishukela zegazi kunye namazinga e-insulin ngelixa uthatha ibutamoren.
Njengoko anabolic, ibutamoren kufuneka igwenywe ukuba unomdlavuza. Bobabini i-hormone yokukhula kunye ne-IGF-1 inokukhuthaza ukukhula komhlaza.
4.Kungani ukhethe iMK-677?
I-Ibutamoren Powder aka MK-677 Ubuncwane buye bathengiswa phezu kwe-counter njengemveliso yomzimba, okanye njengokhemikhali yophando ixesha elide ngoku. IiSARM yinto entsha enkulu ukwenzela ukuba uMk-677 uthengiswe ngale ndlela, nangona kunjalo ayikho i-SARM. Iimvavanyo ze-SARMS zikhetha i-androgen receptor-modulators, eyenziwa ngesenzo bafana ngendlela efanayo ngayo i-steroids; I-SAR kuphela zikhetha kwaye zijolise kuphela kwi-androgen receptors. Into enhle malunga neeSARM kufana nokuthatha i-steroid emnene ngaphandle kokufumana iziphumo zecala (ngokukhawuleza nantoni na). Iziphumo ezichaphazelekayo zeSARM aziwazanga, nangona zingenakubungozi kwaye ekugqibeleni zibuyisele i-steroids zonke ndawonye. Oku kuthethiweyo, (MK-677 Powder) Ubunamandla obuthamoren abujolisi nayiphi na i-receptor ye-androgen emzimbeni womntu, kwaye ngoko ayikho i-SARM. Ukubeka nje, kungcono kunokuba SARM, kwaye kwinqanaba elipheleleyo lalo.
I-MK-677 yindawo esebenzayo ngomlomo, efumaneka kwi-bio eneziphumo ebezikho ekuqaleni nangona zazingazukuchazwa ngokupheleleyo kwi-Growth Hormone Releasing Peptide (GHRP-6). Oku kwaziwa njenge ghrelin… ihomoni yendlala? Amanqanaba e-Ghrelin enza spike ngaphambi kokutya, kwaye iziphumo ze-ghrelin kunye neMK-677 zenzeka ukuba uzive ulambile kancinci. Oku kuyimpazamo, nangona kunjalo, kwaye isenzo sabo sijolise kwimimandla yobuchopho emininzi ebalulekileyo ekuzibandakanyeni kwemetabolism. Ke, njenge-ghrelin agonist (okanye i-GHRP-6), iMK-677 isebenzisa ii-receptors ezilungiselela umzimba ukuba wondle, ukhule, ulungise kwaye usebenze. Kananjalo nokubangela ukonyuka okukhulu kwinqanaba lokukhula kwehomoni.
I-hormone yokukhula ngumthombo wehlabathi wenene wobutsha. Iyakwenza ube namandla, uyaphila, uphilile, uphucula isikhumba kunye neenwele, kwaye mhlawumbi unobulumko. Nangona, i-hormone yokukhula ayizange ifundwe njengomgqugquzeli okhulisayo kubantu abadala, ngokuqhelekileyo ngokwemvelo ngexesha lokuphila kunye nezinga eliphezulu lokuphuhliswa kwengqondo; Okubaluleke ngakumbi kubonelelwe ukuba kuphuculwe ukuqonda kwalabo abane-Alzheimer's disease. I-hormone yokukhula ngokungangabazeki i-hormone ehambayo ekuphuhliseni kwethu ngokomzimba, ukubonelela umqondiso wemisipha yethu ukuze ikhule ibe yanda; ukudala amaseli amaninzi ahlakulele kwaye aqinise.
Ukukhula kwezihlunu kunye nokulahleka kwamafutha yeyona njongo iphambili yesininzi sabantu abanomdla kwi-MK-677. Ulusu oluhle kunye neenwele ngokuqinisekileyo azilimazi, kodwa inyani yokwenyani kukuba i-MK-677 sisixhobo sokukhula esinamandla esikhupha ikhompawundi. Ineyure engama-24 enesiqingatha sobomi, iyenza ukuba isebenze ixesha elide, kwaye ngokungafaniyo neninzi yokukhula kwehomoni ekhupha iikhompawundi ze-MK-677 ayonyusi amanqanaba e-cortisol.
I-Ibutamoren yenye yeeSARMS ezinamandla kunye ezinokwenziwa kwimarike. Kwabo abangaqhelanga nekota, ii-SARM zikhetha i-androgen receptor modulators. Ezi zi yobisi ziyakwazi ukubandakanya kuphela i-androgen receptors kwisistim. Oku kubenza kube luncedo kakhulu kwaye kwezinye iimeko zilunge ngakumbi kune-steroids, kuba i-steroids ixhamla ne-androgen receptors emathanjeni, kwesikhumba nakwamalungu angaphakathi. Oku kungabangela iziphumo ezihlukeneyo, ngelixa i-SARs isenokusetyenziswa rhoqo ngaphandle kokufumana nayiphi na imiphumo. Olu khetho lwenza i-anabolic yabo kwi-androgenic ratio malunga ne-10: i-1, kanti umyinge we-testosterone engumjoqo oqhelekileyo ngu-1: 1. Ngenxa yale SARM iyakwazi ukuvelisa impendulo engcono kakhulu ye-anabolic ngaphandle kweminye imiphumo ye-androgenic efana ne-gynecomastia, ukubhubhisa, uxinzelelo lwegazi oluphezulu.
Abantu abakhubekayo kwiSARM, bathanda Ostarine, I-LGD 4033 okanye iLigandrol, okanye iYK11, zihlala zithandabuza, kuba kubonakala zilungile ukuba ziyinyani. Ewe, kulula ukuvavanya kwaye uzibonele ngokwakho, okanye ujonge iiforamu ezinobungqina obuninzi obunokubonisa ukusebenza kwazo Okona kuphosakeleyo kukuba iiSARM azinamandla njenge-anabolic steroids rhoqo. Ukuba ujonge ukuba sisilwanyana esikhulu, ke ngandlela zonke thabatha ezona steroids zinamandla Anadrol 50, Dianabol, UDaaa Durabolin, Trenbolone, njl. Ezi ziza kukuguqula zibe yindoda eninzi. Kodwa ii-SAR zikhethwa ngokukhethekileyo kwabo bafuna ukufumana umgangatho ophakamileyo, ubunzima bomzimba obubuthakathaka ngendlela engokwemvelo. Omnye unokulindela ukufumana iiplani ze-10-15 ze-muscle ephilileyo ngaphakathi kwimijikelezo enye (ngokuqhelekileyo iiveki ze-4-5). Ukungathethi ngeenzuzo ezinqamlekileyo, ezizinye iimeko nakwizinto ezinomdla ngakumbi.
Le nto yayisisistim esincinci ukwenzela ukuba uqonde ukuba uluphi uhlobo lwe-Ibutamoren. Kodwa le ngqungquthela ikhethekileyo kwaye iphuma kuma-SARM aqhelekileyo ngendlela ekhangeleka kakhulu.
5.Indlela yokusebenzisa i-Ibutamoren
Ukusebenzisa i-MK-677 kulula kakhulu kwaye kulula, kuba sisongezo somlomo kwaye akukho zinkqubo zinzima zibandakanyekayo. Ingathathwa ixesha elide, ukuya kuthi ga kwiiveki ezili-10. Idosi yemihla ngemihla eyi-25 mg. Abanye abaphakamisa amava basebenzisa iidosi ezingama-50 mg nangaphezulu. Oku kunjalo, akuyomfuneko ukuba usebenzisa isongezelelo okokuqala. Ukulungiswa kwethamo ngexesha lomjikelo kuyavunyelwa. Ukuba uziva ngathi idosi oyithathayo ayomelelanga ngokwaneleyo ukuvelisa iziphumo ozilindeleyo, ungayinyusa kancinci kwaye ubone ukuba ingaba inefuthe elomeleleyo na. Kwaye ngokuchaseneyo, mhlawumbi unokufumana iziphumo ezifanayo ngokuthatha idosi esezantsi. Wonke umntu wahlukile, kodwa idosi esemgangathweni ye-25 mg mihla le yenza umsebenzi olungileyo kubasebenzisi abaninzi.
Ukuba ukhangelelene nojikelezo lwezakhiwo zomzimba, uya kubona ukuba abaninzi abantu baphumelele ngokuhlanganisa i-Ibutamoren, i-Candarine kunye Andarine. Ukusetyenziswa kunye, le mveliso yenza ifowuni enkulu yokusika. Umjikelezo onamandla wokuqhawula kwezi zixhobo ezintathu ezidibeneyo zizakuhlala kwiiveki ze-10. Uya kufuneka usebenzise i-25 mg ye-Ibutamoren, i-20 mg Cardarine kunye ne-25 mg yeAndarine. Lo ngumjikelo wabasebenzisi abaphambili, kodwa kunele ukuvelisa iqela elifanelekileyo elifanelekileyo lokumelana neemeko, ukuxhatshazwa nokuxhamla.
6.Yiyiphi imilinganiselo Ndifanele ndiyithathe?
Isiphakamiso seMK-677 Isisombululo: 25 mgs-50 mgs
Olunye uphando lwe-MK-677 lubonisa ukuba umlinganiselo we-MK-677 ophakanyisiweyo ngu-25 mgs-50 mgs xa umlomo.
Ulawulo lwe-MK-677 25 mg lubangele ukonyuka kwama-60.1% kumanqanaba e-serum IGF-1 kwiiveki ezi-6 kunye nokunyuka okungama-72.9% kwiinyanga ezili-12. Kwimodeli yeziphumo ezixubeneyo ezibandakanya unyango, ixesha (inyanga), i-randomization strata (isiseko se-MMSE amanqaku ≤20 vs> 20), kunye nokunxibelelana kwonyango ngexesha, kwakungekho mahluko ubalulekileyo phakathi kwamaqela onyango kwi-CIBIC-plus okanye utshintsho olunentsingiselo ukusuka kumanqaku asisiseko kwi-ADAS-Cog, ADCS-ADL, okanye amanqaku e-CDR-sob ngaphezulu kweenyanga ezili-12.
Isona esasetyenziswa ngokuqhelekileyo esetyenziswa rhoqo ngosuku olucetyiswayo ukubonelela ngenzuzo eninzi kunye nemiphumo engaphantsi kwayo yi-25 mg ngosuku. Nangona kunjalo, uya kufumanisa ukuba umkhiqizo uthengiswa ngefowder okanye ifom e-liquide ukusuka ku-5 mg ukuya kwi-1000 mg okanye ngaphezulu. Ngohlobo olusisigxina sefowder, unokwahlula ama-dosages akho ngokunyameko uze uwaphule kwi-25 mg yokulinganisa imihla ngemihla. Oku kuya kukunceda ugcine imali ngokumalunga neminye imikhiqizo ezayo kwifom yefilisi, iyabiza kakhulu, kwaye inganikezeli ukuba kulula ukuphula amanoni ngokulula.
Ukuthatha i-dose yakho emva kwentsuku kakuhle emva kokuba isigxina seMk 677 Ibutamoren iiyure ze-24. Abantu abaninzi bancoma ukuba uthathe umthamo wakho ngaphambi kokuba ulale ngoba ukukhula kokuqala kwehommone kukwazi ukwenza abanye abantu bazive bekhathele. Oku kudla ngokuba nomphumo oqhelekileyo we-hormone yokukhula okuphezulu-yintoni ke kutheni kucetyiswa ukuba uthathe umthamo wakho ngaphambi kokulala ukuze ungayi kuvuka xa uvuka.
Kuphelele kuwe ukuba ufuna ixesha elide kangakanani ukucwangcisa umjikelezo wakho. Abanye abantu baye baxela i-intanethi ukuba bathathe isongezelelo seminyaka okanye ngaphezulu kwaye babonisa ukuba akukho mpawu yemiphumo emibi. Ngenxa yoko, akukho sizathu sokuba nexesha elide elijikelezayo elijikelezayo kwaye unokugijima Mk 677 Ibutamoren ngokude nje xa ufuna ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuphuma kweGH yemvelo okanye ukungafuneki kwe-pituitary gland. Kulabo baqaphele, unokugcina ubude bomjikelezo wakho kwiiveki ze-12 kodwa zingasetyenziselwa ukuhlala ixesha elide. Abantu abaninzi abaze baphume ngenxa yokuba bayayithanda loo mveliso.
7.Kungani Kunconywa ukuba i-Bodybuilders?
Abaqulunqa umzimba bahlala bekhangela umkhiqizo olandelayo ozayo onokubanceda ukuba bafumane ubuninzi bemisipha kunye nokuphucula ukusebenza kwabo. Kukho amawaka eemveliso ngaphandle apho zonke iibango zinika uhlobo oluthile lwenzuzo. Nangona kunjalo, iziphumo ezinobungozi ezininzi zale mveliso yinto abantu abaninzi abafuna ukuyiphepha. Iziphumo eziqhelekileyo kunye nezinye iingxaki ezinxulumene nempilo kunye nale mveliso ziquka rhoqo:
- Ukwandisa ubunzima bobunzima
- Ukungenzi lutho
- I-baldness yomzekelo
- Igazi elonyukayo
- Abanye abaninzi
Le yilapho uMk 677 Ibutamoren eqala ukudlala kuba sele isifundo sezesayensi kwaye ibhenyhi ihlolwe kaninzi. Emva kweemvavanyo ezininzi kunye neemvavanyo, iziphumo zibonise ukuba i-Mk 677 ibonakaliswe ukuba yinye yezona zinto zilungelelaniso ezingaphezulu kweso sokwakha umzimba; kunye nayo nayiphi na enye into equka ukuqeqeshwa kwamandla.
I-Mk 677 Ibutamoren yinto engcono kakhulu yokwakha umzimba ngenxa yokuba ayiyi kukuchaphazela testosterone amanqanaba kunoma yimuphi umgangatho kuwo onke ngendlela engafanelekanga. Emva kokuthatha le ntlawulo, akukho mfuneko yokugqiba isigaba se-PCT okanye uthathe i-inhibitor ye-aromatase efunekayo kwezinye iimveliso.
Ngaphaya koko, xa uthatha idosi yomlomo, uya kunyusa kwangoko ukukhutshwa kwehommone yokukhula kunye ne-IGF-1 ekhutshwe kwilungu lobudoda ngokunyuka ngamandla kwe-GH kwiiyure ezingama-24 ezizayo. Ezi pulses zomeleleyo zibangela ukuba umzimba wakho wenze i-hormone yokukhula ikhuphe ii-peptides ezikhutshwa ngokwendalo endaweni yonyango uninzi lwabakhi bomzimba basebenzise ukuthatha inaliti ezininzi zokukhula kwehomoni-ukukhupha iipeptides. Nge-Mk 677 Ibutamoren, ithathwa ngomlomo kwaye konke ukukhula kwehomoni kwiiyure ezingama-24 ezizayo kukhutshwa kwidosi enye.
Ngalolu nqanaba oluphezulu lokungabikho komlomo, alufunanga nayiphi na injensi kunye neyodwa ifomu efunekayo ukuvuna zonke iinzuzo. Ngaphambi, abakhi bomzimba babesebenzisa i-injection ye-HGH kunye ne-GH peptide injections eza kufuneka ukuba zithathwe kumayeza ayenzeka ngamaxesha amaninzi ngosuku. Unokucinga ukuba akunakukhathazeka njani oku ngaphezu kokuphazamiseka xa kufuneka uhambe ukusuka eHGH kunye neep peptides zidinga ukugcinwa kwamafriji ngethuba lokuhamba.
Emva kokungca, ivuselela i-pituitary gland ukuba ibangele i-12 enkulu ye-GH. Ukuze uzuze inzuzo efanayo kwiipepptide, kufuneka ujobe i-GHRP-6 ubuncinane ngamaxesha e-12 okanye ngaphezulu ngosuku ukufezekisa inzuzo efanayo. Ukongezelela, le ncediso igcinwa kwiqondo lokushisa lokubangela ukuba kube lula ukuhamba.
Ngosuku ngalunye olulandelelanayo lokusetyenziswa, amanqanaba okufihlwa kwehomoni aya kuqhubeka nokunyuka aye kumanqanaba aphezulu ngokunyuka. Njengoko oku kusenzeka, la manqanaba aphezulu aya kuvumela umzimba wakho ukuba umisele ukuba ungakanani umsipha oza kuba nakho ukupakisha kuwo. Ukongeza, ukuzuza ubunzima kuyakhawuleza kwaye kuyabonakala ngendlela elungileyo kwaye amanqatha omzimba anyibilika ngokulula kunangaphambili. Akuqhelekanga ukuba umntu oyithathayo azuze iiplani ezili-10 kwiveki yokuqala yokusebenzisa isongezelelo.
Njengomgijimi, umgangatho wokulala ubaluleke kakhulu njengoko uqeqesho lwenkqubo yakho yokulungisa nokubuyisela. Kuye kwabonakaliswa ukubonelela ngokubhekiselele komgangatho wobuthongo obunzulu kunye nokuphuculiswa ngokuphawulekayo ngenxa yokuveliswa kwe-hormone yokukhula. Ngeke uziva unamandla ngakumbi ngexesha loqeqesho, kodwa uza kubona ukunyuka okubalulekileyo ekugcinweni kwe-nitrogen. Ngenxa yoko, uya kubona ukuphuhliswa kwemisipha kangangoko ngaphambili kwaye ukunyamezela kwakho kuya kuphuculiswa kakhulu. Kuya kuphinda kubekho uphuculo kwibala lakho ukufaka isikhumba esinempilo kunye neenwele.
8. (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder iinkcukacha:
I-ID yeCAS: 159752-10-0
I-Alias: Ibutamoren, MK-677, MK-0677, L-163,191, L163191, Nutrobal
Ubunzima: Amanzi, i-DMSO, i-Ethanol, iPropylene Glycol
Indawo yokunyibilika: 170 - 172 ° C
Ukugcinwa: kwi-20 ° C ye-2 iminyaka, ukunciphisa ukuvulwa kwemoya evulekile, kugcina kwindawo epholile
Isiqingatha sobomi: iiyure ze-24
Imbonakalo: Okungekho emhlophe ukubeka i powder efanelekileyo, i-hygroscopic, i-acrid iphunga, i-acrid metallic taste
9.Ingathabatha njani iTywala (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder ye?
Ukwenza isisombululo eselulwelo ngaphandle komgubo eluhlaza kuba yeyona ndlela ilungileyo yokulinganisa ngokuthe ngqo iidosi.
Ukwenza i-25mg / ml ye-30ml isisombululo samanzi oya kuyimfuneko:
Hlanganisa yonke into kunye nokuyitshisa kuze kube yilapho ichithwa ngokupheleleyo kwisisombululo.
Iyakungcamla njenge-crap kodwa kulula ukuyisebenzisa.
Ukuthenga i-beaker yeglasi yokuxuba kunye nokufudumeza kunye nebhotile ye-30ml. Ukwenza oku kunye nayo yonke i-powder ye-SARM kodwa ulinganise ubunjani be-MG oyifunayo ngokusekelwe kumlinganiselo wamag / ml ofuna.
10.Genius Thenga i-MK-677 Powder: thenga i-Ibutamoren Powder ukusuka AASraw
tags: Thengisa Powder MK-677, Ibutamoren Powder, MK-677 Powder
GW 501516 / Cardarine Ulwazi oluyisiseko Ukunciphisa ukulahleka kokulahleka: Luhlobo luni lokulahleka kwesisindo oluphambene nawe?